USORO KACHASỊ MMA MAKA ỊHAZI ỤDỊ DRAỊVỤ IKE BỤ NHỌRỌ M! - DISK - 2019
Ajụjụ maka draịvụ ike (ma obu dika ha na-ekwu hdd) - mgbe niile (ma eleghị anya, otu n'ime ógbè kachasị). Ọtụtụ mgbe iji zuo otu nsogbu - diski diski ga-ahazi. Na ebe a, ụfọdụ ajụjụ na-echebara ndị ọzọ echiche: "Ma ọ bụ?" Kedu ihe? Usoro a anaghị ahụ diski, nke ga-anọchite anya ya? " na ihe ndị ọzọ
N'okwu a, m ga-enye usoro kachasị mma (n'echiche m) nke na-enyere aka ịnagide ọrụ a.
Ọ dị mkpa! Tupu ịkpụpụta HDD nke otu n'ime mmemme ahụ - zọpụta ozi niile dị mkpa site na diski ike na mgbasa ozi ndị ọzọ. Na usoro ịhazi usoro data site na mgbasa ozi ga-ehichapụ ma weghachite ihe, mgbe ụfọdụ ike siri ike (na mgbe ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume!).
"Ngwaọrụ" maka ịrụ ọrụ na draịva siri ike
N'uche m, nke a bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịrụ ọrụ na diski ike. Na mbu, enwere nkwado maka asụsụ Russian (maka ọtụtụ ndị ọrụ nke a bụ isi), nke abụọ, nkwado maka Windows OS niile: XP, 7, 8, 10, nke atọ, usoro ihe omume ahụ nwere nkwenye dị mma ma "na-ahụ" niile diski (n'adịghị ka site na ulo oru ndi ozo).
Onyeikpe maka onwe gị, ị nwere ike ịme "ihe ọ bụla" na nkewa disk diski:
nhazi (n'eziokwu, n'ihi nke a, usoro a gụnyere n'ime isiokwu ahụ);
gbanwee usoro faịlụ ahụ n'ejighị data (dịka ọmụmaatụ, site na Fat 32 ruo Ntfs);
weghachite nkebi: ọ dị mfe ọ bụrụ na, mgbe ị wụnye Windows, ị, kwuo, ekenye obere ohere maka diski disk, ma ugbu a ịkwesiri iwelie ya site na 50 GB na 100 GB. Ịnwere ike ịkpụzi disk ọzọ - ma ị gafechara ozi niile, yana enyemaka nke ọrụ a - ị nwere ike ịgbanwe nha ma chekwaa data ahụ;
na-ekekọrịta akụkụ nke diski ike: dịka ọmụmaatụ, anyị kewara diski ike n'ime mpaghara 3, wee chee, gịnị mere? Ọ ka mma inwe abụọ: otu usoro Windows, na nke ọzọ maka faịlụ - ha weere ma merie ma furu efu;
Disk Defragmenter: Bara uru ma ọ bụrụ na ị nwere usoro Fat 32 (na Ntfs, enwechaghị ihe ọ bụla, ọbụlagodi na ị gaghị enweta ọrụ);
mgbanwe akwụkwọ ozi;
wepụ ihe ọkpụkpụ;
ikiri faịlụ na diski: bara uru mgbe ị nwere faịlụ na diski nke na-adịghị ehichapụ;
ikike ịmepụta mgbasa ozi nwere ike ịmepụta: draịva mgbawa (ngwá ọrụ ahụ ga-echekwa naanị ma ọ bụrụ na Windows jụrụ ịkwọ).
N'ozuzu, ọ ga-abụrịrị ihe ezi uche na-adịghị na ya ịkọwa ọrụ niile dị n'otu isiokwu. Naanị ihe dị n'usoro ihe omume ahụ bụ na a kwụrụ ya, ọ bụ ezie na e nwere oge maka ule ...
Njikwa nkebi nke Paragon
A maara nke a nke ọma, Echere m na ndị ọrụ nwere ahụmahụ maarala ya nke ọma. Na-agụnye ngwá ọrụ kachasị mkpa iji rụọ ọrụ na mgbasa ozi. Site n'ụzọ, usoro ihe a na-akwado ọ bụghị naanị ezigbo ikuku anụ ahụ, kamakwa ndị nwere ike ime ihe.
Atụmatụ dị mkpa:
Iji diski karịrị 2 TB na Windows XP (iji ngwanrọ a, ị nwere ike iji ike dị elu na os ochie);
Ikike ịchịkwa nchịkwa nke ọtụtụ sistemụ arụmọrụ Windows (dị ezigbo mkpa mgbe ịchọrọ ịwụnye sistemụ arụmọrụ Windows ọzọ - dịka ọmụmaatụ, iji nwalee OS ọhụrụ tupu ịgbanwuo ya);
Ọrụ dị mfe na nke a na-ejighị n'aka na ngalaba: ị nwere ike ịkewaa ma ọ bụ jikọta akụkụ ahụ dị mkpa na-enweghị ọdịda data. Ihe omume ahụ n'echiche a na-arụ ọrụ n'enweghị mkpesa ọ bụla (Site n'ụzọ, ọ ga-ekwe omume ịtụgharị isi MBR na diski GPT. Banyere ọrụ a, karịsịa ọtụtụ ajụjụ n'oge na-adịghị anya);
Nkwado maka ọtụtụ usoro faịlụ - nke a pụtara na ị nwere ike ịlele ma rụọ ọrụ na nkewa ọ bụla diski ike;
Na-arụ ọrụ na disk diski: na-ejikọta onwe ya diski na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na ya dị ka ezigbo disk;
Akwa ọtụtụ ọrụ maka ndabere na mgbake (dịkwa ezigbo mkpa), wdg.
A free free (site na ụzọ, e nwekwara a ụgwọ ụgwọ - ọ nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ arụnyere) ngwá ọrụ nke na-arụ ọrụ na draịva siri ike. Na-akwado Windows: 7, 8, 10 (32/64 ibe), enwere nkwado maka asụsụ Russian.
Ọnụ ọgụgụ nke ọrụ dị ịtụnanya, m ga-depụta ụfọdụ n'ime ha:
nkwado maka ụdị mgbasa ozi dị iche iche: HDD, SSD, draịvụ USB-flash, kaadị nchekwa, wdg;
na-agbanwe diski diski disse: formatting, resizing, merging, deleting, etc.
nkwado maka MBR na GPT disk, nkwado maka RAID-arrays;
nkwado maka diski ruo 8 TB;
ikike ịkwaga site na HDD ka SSD (ọ bụ na ọ bụghị ngwanrọ software niile akwado ya);
ike ịmepụta mgbasa ozi na-agagharị, wdg.
N'ozuzu, ihe ọzọ dị mma maka ngwaahịa akwụ ụgwọ ndị dị n'elu. Ọbụna ọrụ nke free version ga-ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Nhọrọ ọzọ kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa akwụ ụgwọ. Ụdị nsụgharị (ma ọ bụ n'efu) nwere ọrụ dị iche iche maka ịrụ ọrụ na diski ike, na-akwado Windows 7, 8, 10, enwere ọnụnọ nke asụsụ Russian (ọ bụ ezie na ọ bụghị na ndabara). Site n'ụzọ, dị ka ndị mmepe, ha na-eji algọridim pụrụ iche maka ịrụ ọrụ na "nsogbu" diski - nke mere na e nwere ihe ga-ekwe omume na "ihe a na-adịghị ahụ anya" na ngwanrọ ọ bụla ga-ahụ ngwa ngwa Aomei Partition Assistant ...
Otu n'ime usoro kachasị mkpa (n'etiti ụdị software a): onye nhazi na oge elekere 500 MHz, 400 MB nke ohere disk diski;
Nkwado maka ọdịda ọdịda ọdịnala HDD, yana nke siri ike-ala SSD na SSHD;
Nkwado zuru ezu maka RAID-arrays;
Nkwado zuru oke maka ịrụ ọrụ na HDD partitions: ijikọ, ịkewa, ịhazi, gbanwee usoro faịlụ, wdg.
Na-akwado MBR na GPT diski ruo 16 TB;
Na-akwado ihe ruru elekere 128 n'ime usoro ahụ;
Nkwado maka ngwa draịva, kaadị nchekwa, wdg;
Nkwado nkwado dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, site na mmemme ndị dị ka VMware, Mebere Igbe, wdg.);
Nkwado zuru oke maka usoro usoro faịlụ kachasị mkpa: NTFS, FAT32 / FAT16 / FAT12, exFAT / ReFS, Ext2 / Ext3 / Ext4.
Ọkachamara Ọkara MiniTool - software n'efu maka ịrụ ọrụ na draịva siri ike. Site n'ụzọ, ọ bụghị ihe ọjọọ niile, nke na-egosi na ihe karịrị nde mmadụ 16 ji ọrụ a na Ụwa!
Nkwado zuru ezu maka OS ndị a: Windows 10, Windows 8.1 / 7 / Vista / XP 32-bit na 64-bit;
Ikike imeghari nkewa, mepụta ọkpụkpọ ọhụrụ, ịkọ ha, mmepụta oyiri, wdg;
Ntụgharị n'etiti MBR na GPT disk (na-enweghị ihe data);
Nkwado maka ịtụgharị site n'otu usoro faịlụ gaa na onye ọzọ: anyị na-ekwu banyere FAT / FAT32 na NTFS (na-enweghị ọnwụ data);
Weghachite na weghachite ozi na disk;
Imewanye Windows maka arụmọrụ kacha mma na mwega na diski SSD (dị mkpa maka ndị gbanwere ochie HDD ha na SSD ọhụrụ na ngwa ngwa), wdg;
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ HDD
Ngwa a anaghị ama ọtụtụ ihe ihe omume ndị edepụtara n'elu nwere ike ime. Ee, n'ozuzu, o nwere ike ime naanị otu ihe - usoro mgbasa ozi (disk ma ọ bụ USB flash drive). Ma ọ gaghị etinye ya na nyocha a - ọ gaghị ekwe omume ...
Eziokwu ahụ bụ na ọrụ ahụ na-eme nhazi diski dị ala. N'ọnọdụ ụfọdụ, iji weghachite draịvụ ike n'enweghị ọrụ a enwere ike ime! Ya mere, ọ bụrụ na usoro ọ bụla adịghị ahụ disk gị, gbalịa Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ HDD. Ọ na-enye aka iwepu ozi niile site na diski na-enweghị ike ịnweta (dịka ọmụmaatụ, ị chọghị ka mmadụ gbakee faịlụ gị na kọmputa rere).
N'ozuzu, Enwere m isiokwu dị iche na blog m banyere ọrụ a (nke a na - agwa "ụzọ aghụghọ" ndị a niile):
Ihe dị ka afọ 10 gara aga, n'ụzọ, otu usoro ihe omume dị oke egwu - Nka Ime Anwansi (ọ na-enye gị ohere ịhazi HDDs, kewapụta diski n'ime partitions, wdg). Na ụkpụrụ, enwere ike iji ya taa - naanị ugbu a, ndị mmepe akwụsịla ịkwado ya na ọ gaghị adabara Windows XP, Vista na elu. N'otu aka, ọ bụ ihe nwute mgbe ha kwụsịrị ịkwado ụdị ngwanrọ dị otú ahụ ...
Nke ahụ niile bụ ezigbo nhọrọ!